चुरेमा चोरी ! « News of Nepal
चुरेमा चोरी !
सलिम अन्सारी,प्यूठान । राज्य संयन्त्रको बेवास्ताले दक्षिणी प्यूठानको चुरेक्षेत्र दोहन थालिएको छ। चुरे परिभाषित क्षेत्र सरुमारानी गाउँपालिका २ ददेरी स्थित चुरेभेगमा ढुङगा खोतलेर तस्करी गरिने गरिएको हो। स्थानीयका अनुसार ददेरीस्थित राप्ती नदिबाट निकालिएको गिटी बालुवा र ढुगाँ मुख्य सडकबाटै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा निकालिने गरिएको छ।
त्यसै गरि दर्भान र ददेरीबाट दर्भान भालुवाङ सडकखण्ड हुँदै ढुगाँ निकासी हुने गरेको हो। स्थानीय ट्रयाक्टर धनी र गिरोहको मिलेमतोमा सरुमारानी स्थित राप्तीको चुरेभेग सखाप पार्न थालिएको हो। नदिबाट ल्याइएको ढुङ्गा दर्भान ददेरी सडकखण्डका बिभिन्न स्थानमा जम्मा पारेर रातको समयमा मुख्य सडक हुँदै राजमार्ग कटाउने गरिएको एक बिश्वस्त श्रोतले बताएको हो। धेरै समय भैसक्यो चुरेको ढुगाँ निकाल्न थालिएको छ । श्रोत भन्छ चोरीको नदिजन्य पैदावार सजिलै निकासी हुने गरेको छ। दर्भान ददेरी सडकखण्डमा ठूलै परिमाणमा चुरेका ढुङ्गा निकासीका लागि तयार पारेर राखिएको छ।
यसरी जम्मा पारिएको ढुङ्गा बाहिरी जिल्लामा निकासी हुदै आएको बताइन्छ। माफीयाहरुले दाङ र कपिलबस्तमा बिक्री गर्दै आएका हुन। सरुमारानी गाउँपालिकाको १ र २ नम्वर वडाका भूभाग चुरे पहाडमा पर्छ। चुरे क्षेत्रबाट जिल्ला बिकास समितीले ढुङ्गा गिटी उत्खन्नलाइ प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर राज्य निकायको आँखा नपर्ने गरेका कारण यहाँको चुरेक्षेत्र दोहनका लागि गिरोहलाइ फाइदा पुगेको स्थानीय बताउँछन। ‘सम्बन्धित निकायलाइ हामीले बारम्वार चुरेक्षेत्र दोहन भैरहेको बारे जानकारी गरायौ’ नाम नछाप्ने सर्तमा एक स्थानीय भन्छन– ‘चुरे सँरक्षण देखाउने दात जस्तो मात्र भएको छ। ती निकायबाट रोक्ने प्रयास नभएपछि ढुगाँ गिटि निकासी बढदै गएको छ। ढुगाँ निकासी गर्दा खोलामा बाटो टयाक्टर जाने बाटो बनिसकेको छ।’
नदि नै ढुङ्गा बिहिन हुँदासम्म पनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयले गुनासो गरे। यहाँ दैनिक दर्जनौ टयाक्टरले चुरेको ढुगाँ तथा गिटी बालुवा रातको समयमा दक्षिण तर्फ निकासी गरिरहेका छन।
यता जिल्ला समन्वय समितीको कार्यालयले भने चरे क्षेत्रबाट नदिजन्य पैदावार उत्तखन्न गर्ने अनुमती कसैलाइ पनि नदिइएको बताएको छ। राजस्व शाखा प्रमुख यामलाल पोख्रेलले यस क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवाको ठेक्का दिइएको भएपनि जिल्लाभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार चुरे क्षेत्र बाहेकका ठाउँका लागि ठेक्का दिइएको हो। त्यो पनि जिल्ला बाहिर निकासी गर्ने अधिकार दिइएको छैन।
उनले भने। आइइ प्रतिबेदन अनुसार क्षेत्र तोकेर ठेकेदारलाइ ढुगाँ उत्तखन्न गर्न अनुमती दिएका समेत उनले बताए। चुरे क्षेत्रबाट ढुङगा, गिटी र बालुवा निकाल्ने कार्य अवैध भएको नायक सुव्वा पोख्रेलको भनाइ छ।